Tag: dhageysiga bulshada | Martech Zone
Tag: dhageysiga bulshada
Macaamiisha iyo shaqaaluhu waxay soo saaraan malaayiin calaamadood oo muhiim u ah ganacsigaaga: sida ay dareemayaan, waxa ay jecel yihiin, sababta alaabtan iyo tan aan ahayn, halka ay lacagta ku bixinayaan, maxaa ka wanaagsanaan kara… Ama maxaa ka yeeli kara iyaga inay ku farxaan, wax badan qarash gareeyaan, oo aad daacad ahaato. Calaamadahaasi waxay ku soo qulqulayaan ururkaaga Waqtiga Tooska ah. Medallia waxay qabataa dhammaan calaamadahaas waxayna macno u leedahay iyaga. Marka waad fahmi kartaa khibrad kasta oo soo marta safar kasta. Medallia ee macmalka ah